လန်ဒန် မြို့သားတိုင်း လေထုညစ်ညမ်းမှု ဒဏ် ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံစားနေရဟု မြို့တော်ဝန် ဆို - Yangon Media Group
လန်ဒန် မြို့သားတိုင်း လေထုညစ်ညမ်းမှု ဒဏ် ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံစားနေရဟု မြို့တော်ဝန် ဆို
လန်ဒန်၊ အောက်တိုဘာ ၆
ဗြိတိန်နိုင်ငံ မြို့တော်လန်ဒန်တွင်နေထိုင်သည့် ရှစ်သန်းနီးပါး သောမြို့သူမြို့သားတိုင်းသည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏ လေထုအရည်အသွေးစံနှုန်းထက် အနည်းဆုံး ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုဆိုး ရွားသောအခြေအနေတွင် နေထိုင်နေရသည်ဟု မြို့တော်ဝန်ဆာဒစ်ခန်က ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ကြောင်း အောက်တိုဘာ ၆ ရက် ဆင်ဟွာသတင်းကဆိုသည်။
မြို့တော်ဝန်ရုံး၏ သုတေသနပြုမှုအသစ်တစ်ခုအရ လန်ဒန်မြို့ လေထုအတွင်း PM 2.5 ဟုခေါ်သော ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေနိုင်သည့် အလွန်သေးငယ်သောအမှုန်အမွှားပါဝင်မှုနှုန်းထားသည် WHO ၏ သတ်မှတ်ချက်ထက် အနည်းဆုံး ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော်လွန်နေ ကြောင်း၊ မြို့နေလူထု၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် လေထုညစ်ညမ်းမှုဒဏ် ဆိုးဆိုးရွားရွားခံစားနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ဟု မြို့တော် ဝန်ဆာဒစ်ခန်က ပြောသည်။ လန်ဒန်မြို့အစိုးရအဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက PM 2.5 ဆို သည်မှာ အဆိပ်အတောက်ရှိသော အလွန်သေးငယ်သည့် အမှုန်အမွှားများဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးကို ရေတိုရေရှည် ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ၊ နှလုံးနှင့် သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
အထူးသဖြင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုဒဏ်ကို ကလေးငယ်များ ပိုမိုထိခိုက်ခံစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗြိတိန်တွင် လေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့် နှစ်စဉ်လူပေါင်း ၂၉ဝဝဝ ခန့် အချိန်မတိုင်မီသေဆုံးနေရကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ မြို့တော်ဝန်ဆာဒစ်ခန်သည် လန်ဒန်မြို့၏လေထုအရည်အသွေး ကို WHO ၏ စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီစေရေးအတွက် ၂ဝ၃ဝ ပြည့်နှစ် မတိုင်မီ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး စီစဉ်လျက်ရှိသည်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ယင်လတ် ဗြိတိန်တွင် နိုင်ငံရေး ခိုလှုံနေ၊ အဝေးရောက် အစိုးရဖွဲ့ မည်?
ပါကစ္စတန် အနောက်တောင်ဘက် ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ၌ အသေခံ ဗုံးခွဲ၊ ၁၅ ဦးသေ၊ ၂ဝ ဒဏ်ရာရ
ထူးကဲဒီရေတက်မှုကြောင့် ကျိုက္ခမီရေလယ်ဘုရားတွင် စံချိန်တင် ရေလွှမ်း
ကျိုင်းတုံမြို့၌ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် နမ့်ခင်ချောင်း ရေတက်မှုဖြစ်ပွား
ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတွင် မြေပြို၍ ဂျက်ကီချန်းကို ကယ်ထုတ်ခဲ့ရ
၂ဝ၁၉ မှစတင်ပြီး adidas နှင့် အာဆင်နယ် လက်တွဲမည်
ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်မှု ဒီမိုကရေစီစံနှုန်း မထိခိုက်စေရေး လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အကြံ??